श्रीमानश्रीमतीबिच रातमा कु’टा’कु’ट हुँदा बिहान श्रीमती झु’न्डि`एको फे’ला परिन्(भिडियो हेर्नुस) – Purba Aawaj
श्रीमानश्रीमतीबिच रातमा कु’टा’कु’ट हुँदा बिहान श्रीमती झु’न्डि`एको फे’ला परिन्(भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ३०, २०७८ समय: ७:०६:३१
सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ महलिया भन्ने ठाउमा एकदमै ड”र’लाग्दो अनि र”हस्य’मय घ’ट’ना घ’टेको छ । बेलुका श्रीमानश्रीमतीको सामान्य झ”गडा हुँदा बिहान श्रीमती मृ’त फे”ला परेकीछिन ।
बेलुका श्रीमानसग झ”ग’डा गरेकी श्रीमती बिहान झु”न्डि,एको अबस्थामा फे”ला पर्दा यता परिवारका सदस्य भने तीन छक्क नै परेका छ्न । आखिर यो ह”त्या हो कि आ”त्म”ह”त्या ? घ’ट’नाबारे थप बुझ्न मिडियाकर्मी आज मृ”त’कको घरमै पुगेका छ्न ।
मृ,तककी श्रीमानकि दिदिका अनुसार घ’ट’ना भएको रात आफ्नो भाइ अर्थात मृ”त’कको श्रीमान म”दिरा सेव’न गरेर घर आएको र घर आएपछि श्रीमानश्रीमतीको झ,ग’डा’मात्र नभएर कु’टा’कु’ट पनि परेको बताइन । उनले भाइबुहारीको झ”ग’डा परेको थाहा पाउनासाथ छुट्टाउन गएको र भाइ र बुहारीलाई भिन्दाभिन्दै कोठामा सुताएको कुरा पनि खुलाइन ।
झ’ग’डा मिल्यो होला भनेर आफू सुत्न गएको र एक्कासी बिहान हेर्दा बुहारी झु”न्डि’एको अबस्थामा आफुले पाएको बताउछिन उनी । श्रीमतीले श्रीमानलाई र”क्सी न’खा’नु यो राम्रो हैन भनेर सम्झाउँ’दा यो सबै भएको बताउँछीन उनी । बुहारी यसरी झु”न्डि’नुमा आफ्नो भाइको हात रहेको भन्ने कुरामा भने उनले आ”पत्ति जनाइन ।
श्रीमानश्रीमतीको झ”ग’डा हुनु भनेको सामान्य बिषय रहेको र यसरी प्रा”ण त्या”ग्नु नहुने बताउछिन उनी । सल घा”टीमा बे”रेर पंखाको सहायताले उनी कोठाभित्र नै झु”न्डि’एको उनले खुलाइन । रातको ११ बजेसम्म त झ”गडा नै परिरहेको कुरा पनि उनले खुलाइन ।
सधै ढि”लो उठ्ने बुहारि सुतिरहेकि होलि भनेर वा”स्ता नै नगरेको यता बुहारी भने कहिले नउठ्ने गरि संसार नै छा’डेर गइसकेकी रहिछिन भन्छिन उनी । क”ठै ब”रा सर्बप्रथम आमाको त्यो अबस्था उनैका छोराले देखेका रहेछ्न । उनलाई लागेछ ममि पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ, क”ठै ब”रा ! बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा
Last Updated on: January 14th, 2022 at 7:06 am